ထူးဆန်းသောပန်းတိုင်များ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
သင်တို့ထဲမှအချို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမအောင်မြင်နိုင်သောပန်းတိုင်တစ်ခုပေးခဲ့သည်။ မရောက်ရှိနိုင်သောရည်မှန်းချက်နှင့်အတူပြtheနာကဘာလဲ။ ပြproblemနာကသင့်မှာ ၁၀၀% အခွင့်အရေးမရှိဘူး၊ မိုက်မဲတဲ့ရည်မှန်းချက်ကြောင့်သင်စိတ်ဓာတ်ကျနိုင်တယ်။
အပျိုစင်ဘဝကိုမဆုံးရှုံးမချင်း MO / PMO ကိုရပ်လိုက်မယ်
ငါပြောချင်တာကမင်းဘဝမှာမင်းလုပ်သမျှအားလုံးဟာ MO ကိုရပ်တန့်ဖို့သာဖြစ်တယ်ဆိုရင်၊ မင်းကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုဘယ်တော့မှဖမ်းမှာမဟုတ်ဘူး။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်စေခြင်းကသင့်အားမိန်းကလေးများအားရွေးချယ်ရန်အမှန်တကယ်အသုံးဝင်သောလိင်စွမ်းအင်အချို့ကိုပေးလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်ဤစွမ်းအင်နှင့်ဘာမျှမလုပ်လျှင်၊ အသက်မရှိလျှင်မိန်းကလေးများသည်သင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်သင့်ခြေထောက်ပေါ်သို့ကျသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
"မင်းဘယ်သူလဲ ? ဘဝမှာမင်းဘာလုပ်လဲ” “ ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမဟုတ်ဘူး။ ဒီဟာမလုံလောက်ဘူး
အခြားတဖက်တွင်: သင်သည်အဘယ်သို့မနက်ဖြန်သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်ဆိုရငျကော သင်တို့သည်နောက်တဖန်အပျိုကညာဖြစ်ကြသည်။ သင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်။ Congratz ။ သင်အခုဘာလုပ်ပါသလဲ ? နောက်တဖန် 20 ကြိမ်တစ်ပါတ် Masturbate?
၂ နှစ်၊ ၃ နှစ်အတွင်းအပျိုစင်ဘဝဆုံးရှုံးသွားလျှင်ကော။ သင်ဤတစ်နှစ်လုံးစောင့်ဆိုင်းရုံသာမကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အကျင့်ကိုထပ်မံတိုက်လှန်နေပြီးမိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုကောင်းကင်မှကျရန်အစဉ်စောင့်ဆိုင်းနေသည့်လူတစ် ဦး ဖြစ်ရုံသာလော။ မင်းရဲ့ဘဝမှာမင်းဘာတစ်ခုမှလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။
ငါ MO / PMO ဘယ်တော့မှတော့မှာမဟုတ်ဘူး
အလေးအနက်ထား? ယောက်ျားတွေ။ porn နေရာတိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းမှုကလည်းမကောင်းဘူး။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများ၊ တစ်ချိန်က porn တစ်ခုကဒါမကောင်းဘူး သူမအားချစ်နေစဉ်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများရှာဖွေခြင်းသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည့်အရာဖြစ်သည်။
ဘယ်တော့မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုဘယ်တော့မှမကြည့်၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ဟုပြောခြင်းသည်မည်မျှလက်တွေ့ကျသနည်း။ “ မင်းကဘယ်တော့မှမပြေးဘူးဆိုရင်ငါဟာ ၂ ပတ်အတွင်းမိုင် ၅၀၀ ပြေးလိမ့်မယ်”” ဆိုသည့်အတိုင်းလက်တွေ့ကျ ထိုသို့ရိုးရှင်းစွာမိုက်မဲသည်။
သင်သည် porn ကိုနောက်တစ်ခါထပ်မကြည့်ခြင်းအပေါ်အာရုံမစိုက်သင့်ပါ သင်ဒီမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်ခဏရပ်ဖို့လိုတယ်။ မှန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငါဒီမှာရောက်နေတယ်။ သို့သော်သင်သည်အဘယ်ကြောင့်ထာဝရရပ်တန့်သွားမည်နည်း။
ဘာကြောင့်ဘ ၀ ကိုရဖို့၊ စွဲလမ်းစရာမလိုဘဲလုပ်ဖို့သင်ယူရတာလဲ။ သင်အလုပ်များ။ အေးမြသောဘဝကိုရရှိပါကသင်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်သင်၏ဆန္ဒကိုတိုက်လှန်ရန်မလိုအပ်ပါ၊
အဆီကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ သူကဟမ်ဘာဂါကိုခဏတစ်ဖြုတ်မစားတော့ဘူးဆိုတာသေချာတယ်။ သို့သော်သူ၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးသူရပ်သင့်သလော။ ဟမ်ဘာဂါကိုဘယ်တော့မှမစားဘူးလို့ပြောတာကဒါကထူးဆန်းပြီးမကောင်းဘူးလား။ ယခုတွင်သင်သည်ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီးအရသာရှိသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုမည်သို့ချက်ပြုတ်ရမည်ကိုလေ့လာသင်ယူလျှင်ပင်၊
စည်းကမ်းအချို့ကိုမလိုက်နာဘဲရည်မှန်းချက်တစ်ခုကိုမသတ်မှတ်နိုင်ပါ။ ငါကိုယ်တိုင်သည်“ SMART” စနစ်ကိုနှစ်သက်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာရည်မှန်းချက်ဟူသည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။
, တိကျသောတိုင်းတာ, အောင်မြင်မှုများ, အတိုငျး, အချိန်။
More info: http://en.wikipedia.org/wiki/SMART_criteria
ကိုယ်တိုင်တိုးတက်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အားကစား၊ စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ NLP စာအုပ်တိုင်းသည်သင်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုကိုချမှတ်သောအခါဤစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာရန်သင့်အားပြောပြလိမ့်မည်။
သင်အချိန်သတ်မှတ်ချက်မသတ်မှတ်ထားပါကသင်၏ပန်းတိုင်သို့မရောက်နိုင်ပါ။ စိတ်ကူးကြည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ရည်မှန်းချက်မှာ“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်မကြည့်တော့ပါ” ငါ porn ကိုသုံးနှစ်ကြာရပ်တန့်။ ထိုအခါငါတ ဦး တည်းကိုကြည့်။ ဒါကငါ့ရည်မှန်းချက်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတာလား။ ဟုတ်တယ်၊ ငါ့ရည်မှန်းချက်ကမိုက်မဲတဲ့အတွက်ငါတကယ်အောင်မြင်ခဲ့တာကိုပျော်ရွှင်မယ့်အစားပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ငါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်တာကို ၃ နှစ်ကြာမကြည့်ခဲ့ဘူး။
ထို့ကြောင့်တစ်ချိန်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အတွက်သင်သည်တစ်ချိန်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါမပြုလုပ်ဘဲ ၃ နှစ်အတွင်းဝမ်းနည်းမည်ဟုမပြောမည့်အစားအချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာထားပါ။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်ယနေ့ခေတ်ပုံရိပ်မပျောက်စေရန်အာရုံစိုက်မည့်အစားသင်အခမဲ့ဖြစ်လိုသည့်အတိုင်းသင့်ဘ ၀ ကိုနေထိုင်ရန်အာရုံစိုက်ပါ။
မင်းဟာစွဲလမ်းမှုမရှိတော့တဲ့အခါပုံမှန်ဘဝကိုသာနေထိုင်ပါ။ “ လူကိုရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကောင်လေး” ကိုအမြဲတမ်းမနေပါနဲ့၊ ပြီးတော့မင်းလိုချင်ရင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေမနေပါနဲ့၊ ဒါကမင်းရဲ့ဘဝကိုအပျက်သဘောဆောင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းမရှိသရွေ့။
ငါ rewire ဖို့ဘယ်လိုလည်းစကားပြောချင်တယ်ဒါပေမယ့်ဟေးငါပင်ပန်းတယ်။ စိတ်ဝင်စားမှုတစ်စုံတစ်ဦးပါသလား